Maitiro ekumisikidza vekumaruwa vaunoshanda navo mumusha wakasiyiwa | Kufamba Nhau
Maitiro ekumisikidza vekumaruwa vaunoshanda navo mumusha wakasiiwa
Lola curiel | | General
MuSpain, nzvimbo dzekumaruwa dzinotambura nematambudziko akakura ekushomeka kwevanhu. Kuenda kunzvimbo zhinji dzemadhorobha uye huwandu hwevanhu vakwegura hwasiya mamwe maguta nemisha yakasiiwa zvachose, pamucheto pekunyangarika. Nekudaro, pamberi peiyi tariro yekusava netariro, zvirongwa zvinomuka vatsva vanotsvaga kudzosa vanhu ava kuupenyu uye izvo zvakasimbiswa neichi kukura chimiro chevanhu vanotsvaga nzvimbo dzakachena uye dzakadzikama kuti vatize kusvibiswa uye nekukurumidza kukurumidza kwemaguta.
El coworking iyi sarudzo inonakidza yekugadzira mikana yemabasa mumisha yakasiyiwaIcho chirongwa chinopfuura kupfuura kushanya uye icho chingangobatsira zvakanyanya kumisikidza huwandu hwevanhu, kumutsiridza hupfumi hwemataundi, kuita kuti vazivikanwe, kuvhura iwo mikana mitsva nekubatsira kugarwa kwavo. Asi ndisati ndakuudza maitiro ekumisikidza wekumaruwa anoshanda, ngatitsigirei kuti chii uye sei chaizvo iyo coworking.
1 Chii chinonzi kushanda pamwe uye chinoshanda sei?
2 Chii chinonzi kumabasa ekumaruwa?
2.1 Nzvimbo dzemhando yepamusoro dziripo
2.2 Sosi mbiri yekukosha
3 Maitiro ekumisikidza yako yekushandira pamwe mumusha wakasiiwa?
3.1 Tsvaga nzvimbo
3.2 Dzidza nzvimbo yako
3.3 Funga nezve yako kukosha chirevo
3.4 Gadzira zano rekutaurirana
3.5 Ndeapi maitiro epamutemo andinofanira kutevedzera?
Chii uye sei iyo iyo coworking?
El coworking inzira yekushanda iyo inobvumira vakazvimiririra nyanzvi kuti vagovane nekukudziridza munzvimbo imwechete yebasa. Neiyi nzira, kunyangwe yega yega ichishanda pamapurojekiti akasiyana, nekuti havafanirwe kunge vari vekambani imwe chete, kubatana pakati pevanhu vane hunyanzvi hwakasiyana uye kubva kumatunhu akasiyana uye se inokurudzira kugadzirwa kwemapurojekiti akabatanidzwa. Asi ... Nzvimbo yakasiyana sei coworking kubva kuhofisi yakagovaniswa kana yechinyakare bhizinesi nzvimbo? Around iri basa uzivi, nharaunda ye vaunoshanda navo. Iyi nharaunda inowanzo goneswa ne munharaunda anovaka, munhu anotarisira kuziva iyo nyanzvi yehunyanzvi yeumwe neumwe mushandi pamwe naye uye izvo zvinozvibatanidza kune mumwe nemumwe kuti adye, nekudaro, mweya wenzvimbo idzi.
Zvinoita sei coworking? Iwo pachawo, oparesheni iri nyore, nekuti haidi zvivakwa zvakawandisa kuti uzviise. Izvo zvinhu zvekutanga zvingave: yakanaka internet yekubatanidza, seti yemitemo yakamisirwa kugarisana uye nzvimbo inowanikwa yekuivhurira vamwe. Nekudaro, chero munhu anogona kutora ruoko ne laptop yavo uye kujoina nharaunda. Muchokwadi, mazhinji eaya matanho anomuka mumahofisi aripo mune iyo yakawanda nzvimbo uye muridzi wayo anosarudza kuvhura iyo kune vamwe nyanzvi uye, chokwadika, kune avo mazano.
Chii chinonzi kumabasa ekumaruwa?
Imwe yezvakanakira nzvimbo coworking ndiko kuchinjika kwavanobvumira maererano nenzvimbo yavo. Iyo vatinoshanda navo shanda uye ubatane nemakambani avo, kana asiri iwo freelance, vari kure, saka havafanirwe kushanda munzvimbo yakati. Gomo a coworking mumusha wakasiyiwa rave zano kwete chete rinokwanisika, asi rinoshanda Nei misha yakasiyiwa ingave nzvimbo dzakanakira kutanga kwe coworking?
Nzvimbo dzemhando yepamusoro dziripo
Kana paine chinhu chimwe chasara mumisha yakasiyiwa, inzvimbo. Iva nenzvimbo yakakodzera yekuwana nharaunda coworking zvaisazove, musimboti, chero dambudziko. Uye zvakare, kunaka kwenzvimbo idzi kunofanirwa kusimbiswa. Mamiriro ekumaruwa ane hunhu husingawanzo kuwanikwa mune mamwe marongero emadhorobha.
Kutanga, a mutengo wepasi nedzimba wakadzikira zvisingaite, saka kana uchigadzira nyowani coworking mari yekutanga haifanire kunge yakanyanya kukwirira. Pane rimwe divi, hunhu hwenzvimbo dzekumaruwa hunogona kuve hunokwezva zvikuru yevashandi vanotarisa kushanda munzvimbo yakanyarara uye isina ruzha. Kunyarara hakusi, zvakadaro, ndiko chete mukana. Tora chikamu mu coworking kumaruwa kwaibvumidza vatinoshanda navo nakidzwa negirini uye yakachena nzvimbo dzakagovaniswa munguva yako yekusiya. Iyi nharaunda, yakanakira kudimbura, yaizobatsira kuwedzera kugadzirwa kwevashandi uye kugadzira hukama pakati pavo, chinova chimwe chezvinangwa zvikuru zve coworking.
Ronga rwendo rwako
Bhuku NDEGE yerwendo rwako
Bhuka HOTEL yerwendo rwako
Yakanakisa ZVIITIKO uye MAITIRO muSpanish
Bvarura CAR yerwendo
Tora INSURANCE YOKUFAMBA ne5% dhisikaundi
Bhuka KUSHURE kwako kubva kunhandare yendege
Sosi mbiri yekukosha
El coworking nzvimbo dzekumaruwa dzaisazobatsira chete vavaki vadzo uye vatinoshanda navo vanoita izvozvo. Ivo vanhu vanokurumidza vanoda matanho matsva ekuvaponesa kubva mukunyangarika. El coworking iyi inzira nyowani yekukwezva vanhu vakagadziriswa uye kumutsidzira isina misha.
Kunyange chiri chokwadi kuti, musimboti, vatinoshanda navo vanoenda kunzvimbo idzi vanozviita kwechinguva, nharaunda dzinoshanduka, dzinokura uye dzinodyiswa nevashandi vatsva. Nekudaro, zvido zvinomuka zvakakomberedza aya mahofisi chaiwo. Maresitorendi, nzvimbo dzekurovedza muviri, mahofisi evashanyi, varongi venzira dzekukwira, mashopu, masupamaketi ... Mabhizinesi akasiyana siyana anga aine nzvimbo kana achipa rubatsiro kunharaunda idzi. Aya mabhizinesi aizove nevashandi vevanhu vaifamba uye vaizosara mutaundi. Naizvozvo, isu hatifanire kufunga nezve ichi chinhu chekukurudzira sekunge chaingova sosi yebasa kune avo vane chekuita nazvo. coworkingasi sa sosi yekukosha kwemusha wese.
El coworking Iyo inopa mhinduro kune rimwe rematambudziko makuru anounzwa nekushanya kwekumaruwa, kwenguva pfupi. Kugadzira zvivakwa zvekutengeserana uye maratidziro izvo zvinodikanwa uye zvinobatsira mukati megore. Ngatirangarirei izvozvo kushanda pamwe Iwo haazi mahofisi anorendeswa kumakambani, kana nzvimbo dzekugara dzevashanyi dzinoitirwa kuronga zviitiko zvekugara pamwe chete, inzvimbo dzekushandira pamwe nekuvandudza kugadzirwa uye dzinoramba dzichishanda gore rese.
Maitiro ekumisikidza yako yekushandira pamwe mumusha wakasiiwa?
Kana iwe uchida kugara mutaundi diki kana kushamisika kuti ungaizadza sei zvekare, kana pfungwa ye coworking yekumaruwa inoita senge inonakidza sarudzo, teerera kune inotevera pfupiso yeiyo nhanho dzaunofanirwa kuteedzera kumisikidza yako wega coworking kumaruwa mumusha wakasiiwa.
Isu tatoomerera pakukosha kwenzvimbo uye takasimbisa izvo kune a coworking inoshanda zvakakosha kuve nenzvimbo yakakwana. Neraki riripo hunhu hunoenderana nharaunda yekumaruwa iyo ichapa kukosha kwakakosha kuwedzerwa yenzvimbo dzako. Iko kuwanda kwechiedza chechisikigo, hukuru hwenzvimbo, runyararo rwakakosha pabasa: izvi zvinhu zvinokosheswa zvine mutsigo mukushanda pamwe uye nharaunda yekumaruwa inogona kuzvipa.
Kana yako pfungwa yekumisikidza a coworking Izvo zvinobva mukuda kubatsira kugarwazve kwevanhu mutaundi maunenge uchitova nezvivakwa, iwe watofambira padiki nhanho. Kune rimwe divi, kana zano rikamuka nekuti urikutsvaga mikana yehunyanzvi kure nemaguta, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvivakwa uye kunyangwe misha yese iri kutengeswa uye yaunogona kuwana, kuburikidza neinternet, kutanga chirongwa chako .
Dzidza nzvimbo yako
Paunotenga nzvimbo yekuisa yako coworkingKazhinji, iwe unoongorora iyo nzvimbo usati waiwana. Usati watenga, iwe ita shuwa kuti mamiriro acho akakodzera kuunza yako pfungwa kune zvibereko. Asi kana iwe uchitova nenzvimbo kubva pakutanga, zvakakosha kuti iwe uidzidzire iyo Ziva zvaunogona uye zvausingakwanise. Iwe unofanirwa kuzvibvunza pachako kuti iyi nzvimbo inogona kuitei kune avo vari chikamu chayo uye nekuona kuti ndeapi matambudziko ayo ainopa uye ndeapi eaya matambudziko anogona kugadziriswa. Kuongorora uku kuchakubatsira iwe sarudza icho chako vateereri vateereri chichava. Paunenge uchinge wajekesa, zvichave nyore kwazvo kwauri kuti uchinjise nzvimbo yako kune zvaunoda.
Kunyangwe paine zvakanaka zvakawanda zvekumisikidza nzvimbo dzekushandira mumusha kana dhorobha, hazvisi zvese zvine runyararo. Kuwanika chinhu chakakosha chinodiwa kune coworking anoshanda uye kwete ese maguta ane hwomutambarakede uye hunyanzvi hwekutakura network. Kubatanidza Internet Iyi ndiyo imwe pfungwa yakakosha uye, kunyange hazvo network iri kuwedzera pasi rese, kuchine nzvimbo uko kubatana uye kufukidza kunononoka kana kusagadzikana. Pakupedzisira, mamiriro ezvakatipoteredza ivo vanogona zvakare kuita kuti zviomere kuti chirongwa chishande. Kana musha kana guta riri kutaurwa riri munzvimbo iri kure zvakanyanya kana ine mamiriro ekunze akaipisisa, iwe unofanirwa kufunga izvi kana uchigadzirisa zvakanaka nzvimbo uye uchiona zvekushandisa.
Funga nezve yako kukosha chirevo
Paunopa waunoshanda naye, hausi kubvarura matafura muhofisi kuti ugovane mari, iwe unopa nzvimbo iyo iwe yauchasimudzira kugadzirwa kwenetwork, mazano uye zvakajairika mapurojekiti. Naizvozvo, hazvina kukwana kugonesa nzvimbo uye kuishambadza pawebhu peji. Kana izvo zvaunoda kuti utange mune iri basa uzivi, iwe unofanirwa kupa chimwe chinhu. Izvo zvakakosha kutsanangura izvo zvinoita yako coworking kumaruwa chikumbiro chinokwezva uye sei, kubva pazvivakwa zvayo, iwe uchasimudzira kubatana pamwe nekuonekwa kwemikana mitsva.
Saka, usati watanga, unofanirwa taura zvakajeka zvinoita kuti chako chikumbiro chive chakakosha, nekuti iwe coworking kumaruwa kunogona kubatsira ramangwana rako vatinoshanda navo uye kuti yaizorera sei mapurojekiti ayo akazvimirira (sezvo isiri chete yekutsvaga kugadzira zvakajairika mapurojekiti).
Gadzira zano rekutaurirana
Nekudaro, hazvina kukwana kuti ujekeswe nezve simba reyako coworking. Izvo zvakakosha kuti yako vanobatana ziva chirongwa chako. "Izvo zvisina kutaurwa hazvipo" uye icho chinhu chaunofanira kuisa mune yako coworking kumaruwa. Hazvibatsiri kuva nezvivakwa zvakanakisa, nzvimbo yakanakisa kana mazano akanakisa kana usiri kukwanisa kuudza vamwe kuti mweya wezvaunotaura ndewei.
Saka, pasocial network ichave shamwari yako huru kushambadza uye kushambadza yako kushanda pamwe. Nekudaro, yako nzira yekutaurirana haifanire kungogumira pakushambadzira kana kuvapo kushoma mune network. Unofanira gadzira chiratidzo kusimudzira, nemufananidzo wako uye chako kuzivikanwa. Unofanira kuvapo nguva dzose muma social network uye gadzira webhusaiti inoyevedza yakamiswa mumainjini ekutsvaga. Zvemukati zvaunoparadzira mune ako mafaera zvinofanirwa kunge zviri zvakakosha zvemukati. Iwe unofanirwa kupa zvinopfuura zvinongoshambadzira chete kana iwe uchida kuti ivo vafarire mune yako kushanda pamwe. Kuparadzira nezve uzivi hwe kushanda pamwe kumaruwa, nezve hupenyu hwakaita sei mumusha kana kugovana mashandiro enzvimbo yako zuva nezuva, ipfungwa dzakanaka dzekuunza chirongwa chako padyo neruzhinji.
Ndeapi maitiro epamutemo andinofanira kutevedzera?
Un coworking kumaruwa ibhizimusi uye saka kuisimudza iwe unofanirwa kusimbisa chirongwa chebhizinesi uye ndine mamwe marezinesi. Zano rebhizinesi rinotangisa kana chirongwa chako chichigona kana kwete uye kana uine mari yakakwana kuti utange Kana ari marezinesi, ingangove imwe yenyaya dzinokupa kutemwa nemusoro zvakanyanya. Muchokwadi, hapana chaiyo rezinesi yerudzi urwu yenzvimbo, inoenderana zvakanyanya nerudzi rwezviitiko zvichaitwa mariri. Ziva kuti Maitiro acho akakosha uye kuti uchafanirwa kutsaura chikamu chako chekudyara uye yako nguva ku iva nechokwadi kuti bhizinesi rako riite zvese zvinodiwa pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Maitiro ekumisikidza vekumaruwa vaunoshanda navo mumusha wakasiiwa
Kwamunoenda: United Arab Emirates